Beef Recipe | Colourful Recipes
Thoroughly combine softened butter with garlic.
Season steaks with salt and pepper. Grill to desired doneness.
အမဲသားက တစ်ပေါင် 11.49 ဒေါ်လာ …
ခုဏ ပိုစ့် – အမဲသားပြုတ်ကြော်က အမဲသားက တစ်ပေါင် 5.49 ဒေါ်လာ
ဒီ အမဲသားက အမေရိကားမှာ အကောင်းဆုံး အသား အမျိုးအစားပါ။
အမဲသား အသား အရမ်းကောင်းတယ်ဆိုတာ ပြတာ ..
တချို့က အဆီ ကို ဖယ်တယ်။ Trim excess fat.
ကိုယ့်က အဲဒီ အဆီပါလို့ ကင်စားတာ။
ဒယ်ဒီ ကင်တာ …
Pan ကို အရင်ဦးဆုံး ပူနေအောင် ထား ..
ပီးရင် ထောပတ်တုံး နည်းနည်းထည့် .. ၁ အောင်စလောက်ဆို ရပြီ ..
အမဲသားကို ဆား နှင့် ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ဖြူးထားပြီး
ဟိုဘက် ဒီဘက် လှန်ပြီး ကင်ပေးရင် ၅ မိနစ်ကျော်လောက်ဆို ရပြီ …
အကွက်လေးတွေ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ကင်တဲ့ အခါမှာ အလိုင်းကွက်တွေ ပါတဲ့ အသားကင်တဲ့နေရာမှာ သုံးတဲ့ ဟာ ရှိတယ် … သူနဲ့ ဖိပီး ကင်ပေးရင် အမဲသားကင်ကို အကွက်လှလှ ပုံဖော်နေလိမ့်မယ်။ ဇကားကွက် ဒီဇိုင်း အမဲသားကင် …
အသားအရမ်းကောင်းပြီး လတ်ဆတ်တာမို့ ခဏလေးနဲ့ ကျက်ပါတယ်။ လှီးထားတာလည်း အသား အလွှာပါးတယ်။
By Thet Nandar • Posted in Beef - Grilled, Beef Recipe, Price - Meat, Prices	• Tagged dinner, food, Grilled rib eye steak, rib eye steak